Madaxweynaha Puntland oo daah-furay ololaha ururadda siyaasadda puntland “SAWIRRO” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Puntland oo daah-furay ololaha ururadda siyaasadda puntland “SAWIRRO”
Madaxweynaha Dowlad gobaleedka Puntland Ahna Guddoomiyaha Urur Siyaasadeedka KAAH, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta daah-furay Ololaha Ururadda Siyaasadda Puntland oo todobaadkan ka bilowmaya degmooyinka Qardho, Ufeyn iyo Eyl oo ay ka dhici doonaan doorashooyin hal Qof iyo hal cod ah.
Madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in ka dhabeysay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland,si awooda shacabka loogu dhoweeyo oo ay madaxdooda usoo doortaan. Wuxuuna u mahadceliyay Ururadda Siyaasadda iyo Shacabweynaha Puntland,isagoo u rajeeyay Bulshada tartan Caafimaad qaba.
Taariikh cusub ayeey u tahay dadweynaha reer Puntland, Doorasho Qof iyo cod ah waa markii ugu horreysay ee ay ka hirgelayso Puntland, waxayna tani ka midtahay ballan qaadkii Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu sameeyay xiligiisii ololaha doorashada.
Previous articleWasiirka Amniga Soomaaliya oo war ka soo saaray qaraxii Muqdisho ka dhacay
Next articleJaamacadda Accord iyo hey’adda UNASOM oo Arday u soo gabagabeeyey tababar lagu baranayey isbadalka Cimilada